ယုံကြည်ခြင်း၏လူတို့အဘို့အလွန်ကြီးစွာသောအရေးပါမှုများစွာသောသားစဉ်မြေးဆက်၏ပညာတည်ရှိသည်သောအီစတာ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ကြ၏။ ပြည်သူ့မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်၏ဖြစ်ရပ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့သူတို့ကိုအသုံးချ, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်များကိုတားဆီးဖို့နဲ့ကူညီ ကောင်းသောကံတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ နဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု။
ဤကွီးစှာသောအားလပ်ရက်ရာသီဥတုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် - ဒီပူပြင်းတဲ့နွေရာသီတစ် harbinger ဖြစ်ပြီး, မိုဃ်းတိမ်လျှင် - အအေးမိခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သော။
မုန်တိုင်းသည်ထိုနေ့နောက်ပိုင်းတွင်ခြောက်သွေ့ဆောင်းဦးရာသီ portends ။
အီစတာမတိုင်မီ အကယ်. လုံးဝပျောက်မိုဃ်းပွင့်လယ်ကွင်းထဲကနေမရနိုင် - တစ်ကြွယ်ဝသောစပါးရိတ်ရာကာလတစ် harbinger ဖြစ်ပါတယ်။
အဟောင်းတွေကလူကဒီအားလပ်ရက်သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ဘယ်လောက်ဆံပင်, သူတို့ကဤမျှလောက်များစွာသောမြေးခဲ့သညျကား, သူမ၏ဆံပင် combing သငျ့သညျ။
ဒါဟာအီစတာအပေါ်တစ်ဦးလူလွှဲအပေါ်စီးလျှင်ကြောင့်ရိုးရာဓလေ့ ovevaniya လိမ့်မယ်သင်တို့ရှိသမျှအပြစ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျပါရဲ့ဟုယုံကြည်နေသည်။
တစ်ခုခုချိုးဖဲ့သောပှဲကွီး၏ပထမနေ့၌ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆိုပါကအသေခံတစ်ဦး harbinger ပါပဲ။
အီစတာကိတ်မုန့် - အရိပ်လက္ခဏာ
ရှေးခေတ်ကကတည်းက, အမျိုးသမီးများအထူးကိတ်မုန့်ဖုတ်ရာတွင်ပါဝင်နေနှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်အရိပ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကပါဝငျခဲ့သညျ။ မုန့်စိမ်း kneading အခါနာမည်ကျော်ဆုတောင်းပဌနာကိုဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ။ အစဉ်အလာ, မုန့်စိမ်းတစ်နာရီခန့်အဘို့အသော့ပွငျရမည်ဖြစ်သည်, ထိုသို့ကလူများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေရန်အလွန်အထိခိုက်မခံကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ကတက်ယူမထားလျှင်, ပြီးတော့, အိမ်ဟာအလွန်နေမကောင်းလူကိုရှိပါတယ်။
အီစတာကိတ်မုန့်နှင့်ပတ်သက်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဖော်ပြ, သင်မီးဖိုတဖို၌ထားမတိုင်မီတိုင်းပသခါပွဲဘို့ကမိသားစုဝင်တစ်ဦး၏စဉ်းစားရန်လိုအပ်သောကြောင်းပြောသည်။ ကိတ်မုန့်ပျက်ကွက်ပြီဆိုရင်, ကအပြင်းအထန်နေမကောင်းထံအပ်နှံခဲ့သူတစ်ဦးအဘယ်သူကိုမှဆိုလိုသည်။ ဒါဟာလှပသောထွက်လှည့်သည့်အခါ - ကနျြးမာရေးရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအီစတာကိတ်မုန့်နှင့်အတူဆက်စပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း, အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းသူတို့ကအက်ခဲ့ကြသည်လျှင်ကြောင်းပြောရန်ဖြစ်ပါသည် - မရကောင်းတဲ့လက္ခဏာ, တမိသားစုလုံးအတွက်ဒုက္ခလက္ခဏာ။ တစ်ဦးကောင်းစပါးရိတ်ရာကာလကိုသေချာစေရန်, ပိုင်ရှင်နေ့လယ်စာများအတွက်သန့်ရှင်းစေကိတ်မုန့်၏ခေါင်းပေါ်မှာလယ်သူတို့နှင့်အတူယူလိုအပ်ပါသည်။
အီစတာကြက်ဥ - နိမိတ်လက္ခဏာများ
အီစတာမှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာသေချာတံ့သောကလေးများအနီရောင်ကြက်ဥ (ခရစျတျော၏အသွေးကိုသင်္ကေတ) ပေးရဖို့သေချာပါစေသတည်း။
သူတို့အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်အခြားပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်အသုံးပြုနိုင်ဆိုသညျကားအီစတာကြက်ဥအကြောင်းကိုအရိပ်လက္ခဏာ။ ရှေးခေတ်ကာလ၌, ဂျာမနီအတွက်သူတို့တစ်တွေကလေးကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိသည်ဖို့လိုသူမိခင်များကိုစားကြ၏။
သန့်ရှင်းစေ Krashenki ငြာခဲ့လျှင်အဘယ်သူမျှအမှု၌သူတို့တစ်တွေအပွစျရှိလုပ်ရပ်အဖြစ်၏စွန့်ပစ်ရပါမည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေး - သူတို့သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနေကြသည်။ ဒါဟာပြုမူခြင်း, shell ကိုအတူဖို့လည်းလိုအပ်ပေသည်။
မိန်းကလေးများအဘို့အအီစတာအမှတ်အသားများအချိန်-ဂုဏ်ပြုအနီရောင်ကြက်ဥအဘို့ကို တင်. သောလက်ဆေးရေ, လျှင်, ၎င်း၏လှပမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းဖော်ပြသည်။
ပြည်သူ့ဥများကို အသုံးပြု. သူဘယ်လိုဘုရားကျောင်းဝန်ဆောင်မှု၏အချိန်မှာဂျုံမြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏သောအထွက်နှုန်း, တိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်သည်။ ကမျိုးစေ့ကြဲရာမှထွက်ယူသွားတတ်၏ရှိရာတောသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်။
အီစတာဖယောင်းတိုင် - နိမိတ်လက္ခဏာများ
အဆိုပါဝန်ထမ်းများနှင့်အီစတာကိတ်မုန့်၏အရာ၌ခန့်ထားများအတွက်ဖယောင်းတိုင်ယူရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်သည်နှင့်ကြောင့်သေချာပေါက်ဘုရားကျောင်းထဲကနေအိမ်ပြန်ဆောင်ခဲ့ရမည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ အီစတာရိုးရာနိမိတ်အောက်ပါ Distributed:
ဝန်ဆောင်မှုစဉ်အတွင်းဖယောင်းတိုင်ထွက်ဝင်ရသောအခါမကောင်းတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနာမကျန်းနှင့်အခြားဒုက္ခ portends ယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါဖယောင်းတိုင်န်ဆောင်မှုများအဆုံးတိုင်အောင်နှိမ့်ချမီးရှို့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လူတွေထဲကကိုတင်ပါကကောင်းလှ၏။
ပြဿနာများ, ရန်တွေ့ခြင်းနှင့်မကောင်းတဲ့ကံအများအပြားအမျိုးမျိုးကနေသူ့မိသားစုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သေးသောအခြားအယူသီးမှု၏အဆိုအရကြောင့် အသုံးပြု. တံခါးကိုတော်ဝင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုမီးရှို့ရန်လိုအပ်ပါသည် ဟာဖယောင်းတိုင် ။
သငျသညျအီစတာညဉ့်တွင်မယ့်မြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နွေဦးကနေရေကိုပိုက်ဘက်ဆိုပါကအလွန်အစွမ်းထက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်, နှင့်မိန်းကလေးငယ်များရဲ့အလှတရားတိုးတက်စေရန်။
အီစတာဝန်ဆောင်မှုမှာအရိပ်လက္ခဏာကြောင့်အခြားယုံကြည်သူများနှင့်အတူသန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ဆင်နွှဲနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါရန်အရေးကြီးပါသည်တို့သည်ကြီးစွာသောဖြစ်ရပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအိပ်ပျော်သည်ဆိုပါကသူကဒုက္ခတွေအများကြီး presaging, မကောင်းတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
မိုဃ်းကောင်းကင်၌အီစတာညကြယ်တွေအများကြီးပါလျှင်, သို့ဖြစ်. , ဆဲနှင်းခဲမျှော်လင့်ထားရမည်။
မိန်းကလေးများညဉ့်ကိုလစဉ်စတင်ခဲ့အခါ, သငျသညျဗိမာနျတျော၌အစေခံရန်မသှားနိုငျကွောငျးသိရသငျ့သညျ။ သင်ကဖယောင်းတိုင်ထားရန်အခြားလူကိုမေးလို့ရပါတယ်။
အီစတာအသံမွ - နိမိတ်လက္ခဏာများ
ရှေးခေတ်ကကတည်းကကခေါင်းလောင်း၏အသံ, လူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်နတ်ဆိုးကနေသူ့ကိုထုတ်ပယ်ရန်နှင့်ကျန်းမာရေးကိုပေးပါဟုယုံကြည်နေသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အကကြုံတွေ့အဖြစ်လူအတော်များများသည်သူ၏ကျေးဇူးတရားကိုထောက်ပံ့။ အီစတာညဥ့်နှင့်နေ့ခြင်းတွင်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြုလုပ်သူတစ်ဦးကိုအထူးမှော်အင်အားကြီးရှိကြောင်းထောက်ပြရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ခေါင်းလောင်း၏လက်စွပ်နှင့်ဆက်စပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုထွက်ရှာပါ။ နံနက်ယံဝန်ဆောင်မှုကာလအတွင်းတဦးတည်းအူအဆိုပါခေါင်းလောင်းကြားရတဲ့အခါ, သူကဆန္ဒစေရမယ်ကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ရောက်လိမ့်မည်။ အူနေစဉ်ကြွယ်ဝသောစပါးရိတ်ရာကာလပေးရသစ်ပင်များ, သင်ကောင်းတစ်ဦးလည်းလှုပ်ရှားသူတို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ဆက်ဆံရေး၌နေသောလူများကခွဲခြာ portends အဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျ, ထိုအိမ်တံခါးပေါ်တွင်နမ်းမရနိုငျသညျ, နမ်းစေ့စေ့နားထောင်ကြီးမြတ်အခမ်းအနား၏တစ်ရက်ဖြစ်သင့်သည်။ မတ်ေတာ၏အီစတာအမှတ်တစ်ဦးနမ်းချစ်သူများအတွက်ကျီးကန်းစကားကိုနားထောငျနေစဉ်အတွင်းလျှင်, မကြာမီဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်တဲ့အကြီးအစွန့်စားမှုလည်းမရှိ, ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နမ်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ - အပင်တစ်ပင်အောက်မှာ, ထို့နောက်ကပျော်ရွှင်ဘဝ Herald ပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်နေ့ရက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မျက်ခုံး combed လျှင်, မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌သူမ၏အနာဂတ်ခင်ပွန်းလည်းတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။
မိမိနှုတ်ခမ်းကဒီဧရိယာထဲမှာကိုမီးရှို့သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောယားယံလျှင်အဖြစ်တစ်ဦးခံစားချက် ardent အနမ်းကွိုတငျဖျောနှင့်ဖြစ်ကောင်းမကြာမီအိမ်ထောင်ရေးအဆိုပြုချက်ကိုရနိုင်ပါလိမ့်။
မိသားစုများအတွက်အီစတာသီတင်းပတ်အပေါ်အရိပ်လက္ခဏာပသခါပှဲ hit ယင်ကောင်မှာတစ်ခုတည်းမိန်းကလေးတစ်ပန်းကန်လျှင်, ဒီနှစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်လိုအပ်သောကြောင်းပြောကြသည်။
တစ်ဦးကကောင်းတဲ့လက္ခဏာ - တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာလက်ထပ်ထိမ်းမြားကတိပေးထားသောဤနေ့ရက်ကို cuckoo အတွက်နားထောငျ။
အဲဒါကိုပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ပါလျှင်အီစတာ, ဆင်းရဲသောရာသီဥတုပေါ်, သငျသညျ, ဒီနှစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်အနည်ထိုင်မနေသင့်ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိရရှိရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, အီစတာ - ဒီ, ဒီပွဲတော်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်၏အားသာချက်ယူအောင်မြင်မှုဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေရန်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ရရှိရန်အထူးအီစတာဆိုင်းဘုတ်များရှိပါတယ်:
ဘောဇဉ်စဉ်အတွင်း, သင်သည်ဤသညျကား, လာမယ့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောပန်းကန်မှ ထား. , အဲဒီမှာကိတ်မုန့်တဖဲ့ကိုရခြင်းထားရန်လိုအပ်ပါတယ်: "။ ကလေးတွေသည်ကိတ်မုန့်" ထိုအခါ ထွက်. ငှက် pastries အစာကျွေး။
ဒါဟာအိပ်မက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒီအားလပ်ရက်ပန်းသီးကောင်းကြီးပေးတော်မူလျှင်, ကအပေါ်တစ်ဦးဆန္ဒပါစေနှင့်စားသည်ဟုယုံကြည်နေသည်။
မဆိုကလေးနဲ့အတူတစ်ခြယ်ကြက်ဥအားဖြင့်ခေါက်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, "ခရစ်တော်ထမြောက်တော်မူပြီ" ဒါဟာသိသိသာသာကိုယ်ဝန်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်သည်ဟုဆိုပြန်လျှင်အခြားအီစတာအဆိုအရလက်ခံပါ။
ဒါဟာအီစတာတနင်္ဂနွေမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးဆက်ဆက်အချို့အခွက်တဆယ်ရှိပါလိမ့်မယ်, အဲဒါကတစ်ဦးလူသိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သျောလညျးအဲဒါကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျန်းမာရေးကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကလေးတစ်ဦးဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုးလျှင်, သစ်သားကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမိမိအရှင်းလင်းသောခွကေိုကျော်အီစတာများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းညွှန်ပြပေးသောအခြားရှေးဟောင်းနိမိတ်လူသိများ။ ထို့နောက်သူကလျင်မြန်စွာဒါပေါ်လမ်းလျှောက်စကားပြောနှင့်မှလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ဤကွီးစှာသောအားလပ်ရက်တွင်, သင်သည်သင်၏ဘဏ္ဍာရေးသုခချမ်းသာကိုတိုးမြှင့်နိုင်, ဒါကြောင့်အရိပ်လက္ခဏာတစ်ခုအရေအတွက်ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့အကြံပြုသည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုဆွမ်း, သာပိုက်ဆံသယ်ဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းကိတ်မုန့်နှင့်ကြက်ဥဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်ပါသည်ပြီးနောက်ဒါအီစတာငွေအပေါ်မှာအရိပ်လက္ခဏာ, သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေဝေမျှဖို့လိုအပ်ကြောင်းတိုးမြှင့်ဖို့ကဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်လိုအပ်သောကြောင့်မနှလုံးထဲကအရာအားလုံးလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နှင့်။
အီစတာမှာနေမကောင်း - နိမိတ်လက္ခဏာကို
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဤအတွက်နေမကောင်းလျှင်ရှေးဟောင်းယုံကြည်ချက်အရ, သနျ့ရှငျးသောနေ့က , ရောဂါတာရှည်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်မကြာမီသူ recover ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အင်အားကြီးဒိုင်းလွှားအဖြစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အန္တရာယ်ကနေလူတစ်ဦးကိုကာကွယ်ရန်ယုံကြည်, ဒါကြောင့်ငါတိုင်ကြားချက်ရှိပါက, ကသူ၏အသက်တာမှားဆုံးဖြတ်ချက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပေမည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အီစတာနေ့အပေါ်အရိပ်လက္ခဏာအိပ်မက်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌, တစ်ဦးဦးသေဆုံးဆွေမျိုးကိုမြင်လျှင်လျှင်သူမဟုတ်သလိုသူ့မိသားစုကိုမနာရမပြုခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
သန့်ရှင်းသောဘုရားအပတ်သေ - နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို
အသေခံခြင်း, အသြသဒေါက်အစဉ်အလာအရသိရသည်ကြောင့်ဘယ်လိုကျေးဇူးတော်ရိပ်မိရန်လိုအပ်သောအခါရက်အနည်းငယ်တစ်နှစ်ရှိပါတယ်။ အီစတာနေ့၌အရိပ်လက္ခဏာဤကွီးစှာသောအားလပ်ရက်သေဆုံးသွားကြသူလူများ, ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဖြင့်မှတ်သားကြောင်းပြောကြသည်။ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုဆက်ဆက်သန့်ရှင်းသူတို့အဖို့ကောင်းကင်သို့ဝင်။ ဒါဟာတစ်ဥအနီသည်သူ၏လက်ျာလက်ကိုချပြီးအားဖြင့်လူတသင်္ဂြိုဟ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
သင်္ကေတပြ - တဲ့လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ကျဆင်းသွား
ဘာသာရေးပွဲတော်စက်တင်ဘာ 21 - နိမိတ်လက္ခဏာများ
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး mouse ကို၏အိပ်မက်?
သခင်ဘုရား၏ပွောငျးလဲခွငျး - နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို, အကောက်ခွန်
အဆိုပါ Little ကမင်းသား၏ပြတိုက်
Nina Dobrev - ကိန်းဂဏန်းများ၏ parameters တွေကို
မျက်နှာကျက် drywall အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဂျင်းလက်ဖက်ရည် - စာရွက်
Polycystic သားဥအိမ်နှင့်အတူ Laparoscopy
ဆောငျးရာသီမိုးကြိုးပစ် - နိမိတ်လက္ခဏာများ
မိမိအဘောင်းဘီထဲမှာ pooping ကလေးသူငယ်
ပိုးစာသီး - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
အဘယ်အရာကိုသောကြာနေ့စိန့် Paraskeva စေသည်?
အဆုတ် fibrosis - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု